मल्टिमिडिया | mulkhabar.com
दुइ दिनमै चर्चामा गुरूङ भाषाकाे म्युजिक भिडियाे : छुट्ला है !
काठमाडौं, २३ बैसाख । म्युजिक भिडियोको बजार प्रतिस्पर्धामा भर्खरै सार्वजनीक भएको गुरुङ भाषाको म्युजिक भिडियो अग्र स्थानमा पुग्न लागेको छ । भिडियोमा केश बहादुर गुरुङ र पुनम गुरुङको स्वर रहेको छ भने रोजनी गुरुङ, विकास गुरुङ, पिया गुरुङ, सागर राई, क्रिपीता गुरुङ, विशाल माझीले नृत्य प्रस्तुत गरेका छन् । तेञ्जी लामाले निर्देशन गरेको भिडियोमा गुरुङ […]
Posted in Videos,मल्टिमिडिया,मुख्य समाचार,साहित्य / कला मुख्य Read More »
खाली खुट्टेले लियाे मार्केट : लाै हेर्नुस भिडियाे
काठमाडाै, १२ चैत – खाली खुट्टे भनेनी भनुन्, म मेरै माटाेमा हुन्छु, पसिना बगाउँछु भन्ने बाेलकाे म्युजिक भिडियाे सार्वजनिक भएसँगै चर्चामा अएकाे छ । अाेखलढुंगाका माअाेवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलकाे शव्द रचना र जनकलाकार चेतन सापकाेटाकाे स्वर रहेकाे गितमा बालकृष्ण ढुंगेलको आत्मकथालाई समेटिएको छ । गित एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन ओखलढुंगाले प्रस्तुत गरेको हो । […]
जनगायक झंकारले ल्याए लुट्न हुन्न देश कान्छा (भिडियो)
काठमाडौं , ३० फागुन – जनगायक झंकार मगरले नयाँ म्युजिक भिडियो लुट्न हुन्न देश ल्याएका छन् । गीतमा उनले नेपालको ग्रामीण भेगमा बस्ने एउटा गरिव परिवारमा आर्थिक समस्यामा परका एकजना युवा परिवारको दवावका कारण देश लुट्न जान लागेको तर यसरी देश लुट्न हुँदैन भन्दै उनलाई देश बनाउने दिशामा फर्काएको सन्देश प्रवाह गरिएको छ । गीत […]
Posted in Videos,मुख्य समाचार Read More »
महिलाकाे रेस्लीङ : मन थामेर हेराैं भिडियाे
Posted in Videos,मल्टिमिडिया Read More »
मन जीत्दै मनिषा राईको ‘लैबरीको भाकैमा’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं, १६ माघ । ओखलढुंगाकी चेली मनिषा राईको सुमधुर स्वरमा सजिएको लैबरीको भाकैमा म्युजिक भिडियाले युवाहरुको मन जित्न सफल भएको छ । लैबरी लोकप्रीय बन्दै गएको देखिएको छ । राकेश किराँतीको शव्द रहेको म्युजिक भिडीयोमा मनिषाले एकल स्वर दिएकी छिन् । मारुनी नाचेको र काफल खाएको तथा परिती लाएको कुराहरुलाई गितमा लयबद्ध गरिएको छ । […]
तीन दिनमै लाखौंले हेरे चलचित्र मेरी मामु (भिडियो)
Posted in Videos,मल्टिमिडिया,मुख्य समाचार Read More »
२ करोड १५ हजारले हेरेकाे याे गीत छुटाउनु त भएन ? भिडियोसहित
काठमाडौं, २८ पुस । नेपालको गित संगितको बजारमा तहल्का पिट्न सफल यस वर्षको सबैभन्दा चर्चित लोक दोहोरी सालको पातको टपरी हुनीलाई अहिलेसम्म युट्युबमा २ करोड दश हजारले हेरिसकेका छन् । चर्चित भुमिगत गायीक विष्णु माझीको स्वर रहेको चर्चित गीत र म्युजिक भिडियो तपाईले हेर्नुभो की ? कि अझै सम्म हेर्नुभएको छैन । यदि छैन भने […]
Posted in Videos,मुख्य समाचार,साहित्य / कला मुख्य Read More »
ढाडमा नशा च्यापीएकाे उपचार कसरी गर्ने ? (भिडियो)
काठमाडौं, १३ पुस – तपाईं वा तपाईंको परिवारका सदस्य काेही ढाडकाे नशा च्यापिएर पीडित हुनुहुन्छ ? उपचार गर्नकाे लागि अस्पताल धाईरहनुभएकाे छ हाेला ? यसकाे कारण र समाधानका उपायबारे के तपाईं जानकार हुनुहुन्छ ? लाै हेर्नुस् के हाे याे समस्या , कसरी हुन सक्छ यसकाे उपचार ? यससम्बन्धी विज्ञ डा. सुनिल पाैडेलबाट लिअाैं जानकारी –
Posted in Videos,मुख्य समाचार,स्वास्थ्य / जीवनशैली Read More »
पुर्व मन्त्री तथा कमाण्डर जनार्दन पुत्री भन्छिन् कसरी बुझाउँ याे मन ( भिडियो)
काठमाडौं , पुस – म्युजिक भिडियोका भिडमा एउटा अर्को म्युजिक भिडियो अहिले चर्चामा छ । पुर्व माअाेवादी कमाण्डर र गृह एवम् सफल उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर पुत्रीले माेडलिङ गरेकाे भिडियो चर्चामा रहेकाे हाे। कसरी बुझाउँ याे मन नामक म्युजिक भिडियाेमा काव्यता शर्माले अभिनय गरेकी छीन् । हेराैं उक्त भिडियो ।
फुलन्देकी अामाले यसाे गरेपछि शिव परियार झन्डै बेहाेस !(भिडियो)